‘शक्ति केन्द्रको आसेपासे नभई नेपालमा कुनै पनि व्यवसायीको उदय भएको छैन’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — पेसाले व्यवस्थापक तथा व्यवस्थापन सल्लाहकार सुजीव शाक्य टिप्पणीकारका रूपमा भने अलि फरक छन् । अर्थात् नेपालको निजी क्षेत्रले राजनीतिक दलको आडमा गरिरहेको ‘कार्टेलिङ’ र नेताहरूको आसेपासेवादमाथि चर्को आलोचना गर्नेमा उनी पर्छन् ।
नेपाल ईकोनमिक फोरमका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेको शाक्यले चार पुस्तक (अनलिसिङ नेपाल, अर्थात् अर्थतन्त्र, अनलिसिङ द ब्रज र अर्थात् परिवर्तन) प्रकाशन गरिसकेका छन् । नेपालमा ‘बिड’ म्यानेजमेन्ट कम्पनीमार्फत करिब एक दर्जन मुलुकमा परामर्शदाताका रूपमा समेत उनले काम गरिरहेका छन् । उनै शाक्यसित निजी क्षेत्र, त्यसलाई संरक्षण गर्ने तौरतरिका, विदेशी लगानीको अवस्था, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको जड, रेमिट्यान्सको भविष्य तथा व्यवस्थापन र अर्थराजनीतिक सम्भावनाबारे ई-कान्तिपुरका लागि कृष्ण आचार्य र राजु चौधरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंले पछिल्लो पटक ‘दलाल पुँजीवादको जड नेपाली ब्रान्डको समाजवादमा छ । यसर्थ जुन व्यवसायीले यो धारणा अघि सारेको छ, तुलनात्मक रूपमा द्रूत प्रगति भएको छ‚’ भन्दै ट्वीट गर्नुभएको छ । यसको अर्थ के हो ?
नेपालमा प्राय: सबै राजनीतिक दलले समाजवादको कुरा गर्छन् । त्यो भारतबाट प्रभावित समाजवाद हो । समाजवाद भन्ने कुरा कोलकाताबाट आएको हो । समाजवादको कुरा गर्नुपर्दा आफूलाई मिल्ने खालको दृष्टिले मात्रै हेर्ने गरिएको छ । पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशदेखि नै भित्रतिर हेर तर बाहिर नहेर भन्ने गरिन्छ । हाम्रो धर्मले पनि त्यस्तै सन्देश दिन्छ । त्यसकारण हाम्रो समाजवाद भनेको भित्रतिर हेर्ने देखिन्छ ।
उदारवाद भन्ने तर आफूलाई मन परेको मान्छेसँग मात्रै काम गर्ने, बाहिरको मान्छेलाई आउन नदिने प्रकृतिको समाजवाद हो हाम्रो । बाहिरको मान्छे आउन नदिने भनेको मुख्य गरी वैदेशिक लगानीमा अवरोध गर्ने हो । किनभने लगानीकर्ता आउनेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय नियम आउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ नियम पनि आउँछन् । त्यसैले उनीहरूलाई आउनै नदिने खालको नीति छ । प्रतिस्पर्धाबिना राज गर्न सक्ने वातावरण बनाउने चलन छ । यो राजाको पालादेखि नै भएको हो । महेन्द्र, विश्वेश्वर कोइरालाले पनि समाजवाद भने पनि यसै गर्थे । तर खासमा समाजवादमा समानता हुनुपर्ने हो । यहाँ प्रतिस्पर्धाका लागि समानताको कुरै छैन ।
जुन वादको कुरा गरे पनि आसेपासेलाई बढावा दिने काम भइरहेको छ । विशेष गरी दोस्रो जनआन्दोलनयता १०–१५ वटा व्यापारिक घरानाले त्यसको लाभ लिइरहेका छन् । ती व्यापारिक घराना कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रसँग निकट भएर ठूला भएका छन् ।
शक्ति केन्द्र अर्थात् राजनीतिक दल तथा नेताका आसेपासे नभई कसैको पनि उदय भएको छैन, जो ठूला व्यापारी भए उनीहरू संरक्षणले मात्रै उदाएका हुन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । शक्ति केन्द्रको आसेपासे नभई नेपालमा कुनैपनि व्यवसायी उदय भएको छैन । पहिलाका व्यवसायिक घराना जति अगाडि बढे, ती सबै नेतृत्वका आसेपासे भएर अघि बढे । नेपालमा शान्ति वनस्पति घिउको कारोबार गर्नेलाई समेत दरबारको संरक्षण थियो । स्व. कमलमणि दीक्षितले भन्नुभएको पनि थियो- ‘दरबार’को संरक्षण नभई व्यावसायिक घराना अगाडि बढ्न सक्दैनन् । त्यस्तो दरबार पहिले एउटामात्रै थियो, अहिले आसेपासे संरक्षण गर्ने ‘दरबार’ बढी छन् । राजनीतिमा जोडिएर ‘कार्टेलिङ’ चलिरहेको छ ।
समस्याको जड निजी क्षेत्र हो कि राजनीतिक दल अथवा नेता ?
समस्याको यसको जड हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारसँग पनि जोडिएर आउँछ । अहिले १० करोड रुपैयाँ चन्दा भनेको सामान्य भइसक्यो । एक दशक अघिसम्म १ लाख चन्दा दियो भने कति धेरै भन्ने जस्तो हुन्थ्यो । पहिलो जनआन्दोलनको बेलासम्म राजनीति गर्नेले बलिदान नै दिने हो भन्दै भएको सम्पत्ति पनि सक्थे । दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजनीतिबाट पैसा जम्मा गर्न सुरु भएको हो । व्यापारीहरूसँग साँठगाँठ बढाउने र पैसा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिकर्मीहरूमा बढ्यो । अहिले त व्यापारी नै राजनीतिमा आइसके । अहिले धेरै मान्छेलाई अन्य कामभन्दा पनि नेताको पछि लाग्दा फाइदा हुन्छ भन्ने प्रभाव परिसकेको छ । त्यसकारण अहिले व्यापारमा राजनीति र राजनीतिमा व्यापार दुवै छिरिसकेको छ । यो यहाँ मात्रै हैन, संसारभरि यस्तै छ ।
अमेरिकामा व्यापारी नै राष्ट्रपति बनिसके । यहाँ पनि बिस्तारै हुने नै त्यही हो । राजनीतिक दलहरूलाई पैसा तिर्नुभन्दा आफंर सिधै पदमा पुग्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने विचार व्यापारीहरूको छ । त्यसकारण अबको ८/९ वर्षमा कुनै व्यापारीले नै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको पद ताक्न सक्छन् । मन्त्री त सामान्य भइसक्यो । सन् २००६ मै राजाले व्यापारी मन्त्री बनाएकै हुन् । त्यो शृंखला फराकिलो हुँदै गएको हो । यो घट्ने सम्भावना देखिँदैन । किनभने एउटा सामान्य नागरिकलाई पनि अहिले आर्थिक रूपान्तरण वा परिवर्तन ल्याउने हो भने आफू नै पदमा पुग्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ । व्यापारीहरूलाई झन् बढी लाग्छ । कतिपय देशमा व्यापारबाट मुलुक सम्हाल्न पुगेका मान्छेहरूले राम्रो काम पनि गरेका छन् । यो सकारात्मक कुरा पनि हो । व्यापारीहरू राजनीतिमा छिर्नु हुँदैन भन्ने होइन । तर मुख्य कुरा उनीहरूको नियत कस्तो हुन्छ भन्ने हो ।
तर हामीकहाँ एउटा व्यापारीलाई सांसद वा मन्त्री बनाउँदा सिंगो पार्टी वा सरकार नै विवादमा पर्ने गरेका छन् । किनभने व्यापारीकै पक्षमा निर्णय गरेका कैयौं उदाहरण छन् । तपाईंले भने व्यापारी नेतृत्वमा पुगे राम्रो हुन सक्छ भन्नुभयो । नेपालकै सन्दर्भमा त्यस्तो सम्भावना छ ?
अहिलेका कुनै एउटा व्यक्ति वा व्यापारीलाई हेरेर नकारात्मक नहोऔं । आशाको कुरा पनि गर्नुपर्छ । नेपालको आधा जनसंख्या २५ वर्षमुनिको छ । अहिले नेपालको व्यापार व्यवसायमा युवा उद्यमीहरूले धेरै फड्को मारिसकेका छन् । राजनीतिमा पनि त्यो हुन्छ भन्ने विश्वास छ । राजनीति होस् वा व्यापारबाट आएकाहरूमार्फत नै परिवर्तन हुन सक्छ । त्यसका लागि संघीयता थप बलियो भएर जानुपर्छ । काठमाडौं बाहिर स–साना नगरपालिकामा राम्रो नेतृत्व देखिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि गुजरातमा ३ पटक प्रधानमन्त्री भएर आएका व्यक्ति हुन् । भारतमा मोदीको उदय जस्तै यहाँ पनि कोही आउन सक्छ । व्यवसायीहरूमा पनि म त्यो सम्भावना देख्छु । तर अहिलेका राजनीतिक पार्टी तथा तिनको नेतृत्वले भने राम्रो काम गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।
अहिलेका शीर्ष नेताभन्दा पनि संंघीयताले नै नयाँ नेतृत्व जन्माउँछ भन्न खोज्नुभएको हो ?
अहिले राजनीतिक दलका ४/५ जनाले नेतृत्व हाँकेका छन् । उनीहरू अब किन र केका लागि आफ्नो समय लगानी गर्ने भन्नेमै स्पष्ट छैनन् । मैले अहिले नेपालमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छ, कार्टेलिङ हुनुहुँदैन भन्छु । वैदेशिक लगानी आएन भने मेरो कम्पनी ‘बिड’ को भविष्य छैन भन्ने मलाई राम्रो गरी थाहा छ । व्यवसाय आएन भने म पनि फस्टाउँदिनँ । त्यस्तै कुनै पनि नेताले आफ्ना छोराछोरी, परिवार र पार्टीको भविष्यका लागि मात्र काम गरिरहेका छन् । अहिलेको नेतृत्वमा समस्या नै यही हो । त्यसकारण पनि अबको निर्वाचनपछिको ५ वर्षपछि केही फेरबदल हुन सक्छ । अहिले नेतृत्वबाट केही हुँदैन भन्नेबारे सब जानकार छौं । सबै जना आफ्ना किचन क्याबिनेट बनाएर उनीहरूलाई फाइदा हुने काम मात्रै गरेर बसेका छन् । यो सबै पार्टीको शैली हो । यस्तो अन्य देशमा पनि छ । भारतमा रिलायन्स कम्पनी छ । यो कम्पनी इन्दिरा गान्धीनिकट भएर फस्टाएको हो । अहिलेको मोदी सरकारसँग पनि निकट छ ।
भारतको रिलायन्स कम्पनीको कुरा गर्नुभयो । रिलायन्सले पहुँचसँगै विविधीकरण पनि गर्यो , त्यो खालको मानसिकता हाम्रो निजी क्षेत्र/व्यापारीमा देख्नुहुन्छ त ?
व्यवसायी भनेको जहाँजहाँ अवसर हुन्छ, त्यहीँ जाने स्वभावको हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्र खोलियो, सबै त्यता लागे । व्यवसायीले देशमा हुने अवसरलाई विविधीकरण गरेरै लैजान्छन् । तर नेपाली व्यवसायीमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सोच भने कम छ ।
कसरी कम भनेर दाबी गर्नुहुन्छ ?
म बैंक स्थापना गर्छु, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकभन्दा खतरा प्रणाली राख्छु, नेपालमा सफल भएपछि अन्य देशमा गएर खोल्छु भन्ने सोच उनीहरूमा छैन । गोल्ड स्टार जुत्ताले गरे जस्तै गर्छु भन्नेहरू कम छन् । अरूले बनाएको सामान ल्यायो, बिक्री गर्योर, त्यसैमा धेरै फाइदा हुन्छ भन्नेहरू धेरै छन् । जापान, भारत, कोरियाले बनाएको गाडी बेच्यो, पैसा कमायो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सिस्टम पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै हुनुपर्छ । नेपालका सन्दर्भमा अहिले सफ्टवेयर कम्पनीहरूले मात्रै त्यस्तो सोच राखेर काम गरिरहेका छन् । ८ सय सफ्टवेयर कम्पनीले नेपालको निर्यातको झन्डै ३७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।
यसमा सोच, परम्परागत तरिकाको मात्रै समस्या हो कि राज्यका तर्फबाट पनि कमजोरी छन् ?
राज्यका तर्फबाट पनि समस्या छ । राज्य पनि संस्था खडा गरेर, अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसको साटो कुनै नीति बनाउनुपर्दा एउटा व्यापारीलाई बोलाएर उसको पक्षमा निर्णय गरिन्छ । व्यापारीलाई बोलाएर सुझाव लिएपछि उसले आफ्नै हितको कुरा गर्छ । आफ्नै स्वार्थका कुरा गर्छ । यसबाट टाढा बसेर अध्ययन–अनुसन्धान गरेर काम गर्ने गरिएको छैन । अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत प्रयोग गर्न सकिएको छैन । म स्वर्णिम वाग्लेको कार्यकाल सम्झिन्छु । उनी राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा भिजन २०३० दस्ताबेज बनाए । फराकिलो सोच राखेर दीर्घकालीन रूपमा उपयोगी हुने धेरै प्रकारका दस्ताबेज उनले बनाए । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सोच ल्याए । तर, यस्तो सोच अहिले धेरैमा छैन ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका मुख्य कारण केके हुन् ?
हामीले अर्थतन्त्रको समग्र संरचना सुधार्न सकेका छैनौं । गत एक वर्षमा संसद्बाट एउटा पनि विधेयक पास हुन सकेको छैन । व्यापार, व्यवसाय एवं अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध ऐन आउन थाले भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्छ । हामीले चाहेको आर्थिक वृद्धिका लागि कानुनी सुधार महत्त्वपूर्ण पाटो हो । योजना आयोगले तयार पारेको भिजन २०३० ले स्पष्ट भनेको छ– वर्षमा करिब ८ बिलियन डलर लगानी चाहिन्छ । तर त्यो कसरी आउँछ ? त्यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी नै चाहियो । त्यसका लागि आर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्योह । त्यसबाट रोजगारी बढ्छ । कर तिर्नेहरू पनि बढ्छन् । आर्थिक गतिविधि बढ्ने भनेको लगानी बढाएरै हो । तर, त्यसका लागि कानुनी रूपमा पहल भएन । नेपालको निजी क्षेत्रले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन त्यति चासो देखाएन ।
दोस्रो कुरा, मानव स्रोत हो । हामीसँग दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ । कुनै कम्पनीले नयाँ प्रोजेक्ट लगानी गर्न खोज्यो, पैसा त ल्याउन सक्छ, मान्छे कसरी ल्याउने, त्यसमा थप राजनीतीकरण पनि हुन्छ । अहिले निर्माण आयोजनाहरूमा धेरैजसो भारतकै कामदार छन् । नेपालबाट भारत झन्डै ३ बिलियन डलर रेमिट्यान्स गइरहेको छ । तेस्रो हो, नीति कार्यान्वयन, जुन हामीकहाँ एकदमै फितलो छ । भएको नीति पनि परिवर्तन भइरहने समस्या छ ।
अहिलेसम्म आएको विदेशी लगानीलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
विदेशी लगानी आएर नोक्सान हुने अवस्था छैन । बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर र सूर्य नेपालले धेरै नाफा गरेका छन् । नेपालमा आएर लगानी गरी घाटा भएको एकदमै कम छ । तर नाफा हुने मुलुक हो भनेर विदेशी लगानीबारे ‘स्टोरी टेलिङ’ नै भएन । सफलताको कुराभन्दा असफलताको सन्देश बढी बाहिर गइरहेको छ । अर्कोतर्फ भारत र चीनको खाडलले पनि समस्या छ । खासमा भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाबारे हाम्रो एजेन्डा नहुनुपर्ने हो । चीनले भारत खायो, भारतले चीनलाई पेल्यो भन्ने बहस बढी हुन्छ । यसले पनि हाम्रोमा विदेशी लगानी ल्याउन असर गरिरहेको छ । तर भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा, इगो र हस्तक्षेपले पनि समस्या त भएको छ नि ? जस्तै चीनले भारतको हाइड्रोपावरको बिजुली किन्दिनँ भनेर नीति नै बनाएको छ ।
समस्या भएकै हो । हामीले त्यसका पछाडि लाग्नुभन्दा आफैं केही गर्न सकेनौं । भारतलाई बिजुली बेच्नुको साटो चिनियाँ कम्पनीको लगानी ल्याएर एउटा ठूलो अटोमोबाइल्स उद्योग खोल्न सकिन्छ । त्यसबाट उत्पादित अटोमा मेड इन नेपाल लेखेर भारतमा बिक्री गर्ने सोच राख्न सकेनौं । हामी त केवल व्यापारिक सोचमै रमाएर बसेका छौं । अहिले हामीले भारत र चीनबीच एउटा पुल बनाइदिने हो भने ढाँट हालेर त्यहाँबाट पैसा कसरी कमाउने भनेर मात्र सोच्छौं ।
तपाईंको बढी जोड विदेशी लगानीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा देखिन्छ । तर हाम्रो राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरूले राष्ट्रिय पुँजी मात्र भनिरहेका छन् । यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि पार्टीलाई चन्दा दिँदैन । पार्टीलाई चन्दा दिने स्रोत भनेको राष्ट्रिय पँुजीपति हो । राष्ट्रिय पुँजीपतिले मात्रै दल र तिनका नेतालाई चन्दा दिएर पालिरहेका छन् । ब्रिटिस तथा अमेरिकन कम्पनीले नेपालमा चुनाव आउँदै छ, एक–एक करोड चन्दा दिनुपर्छ भनेर कहिल्यै सोच्दैनन् । त्यसकारण राजनीतिज्ञको फाइदा राष्ट्रिय पुँजीमै छ । त्यसैले नेताहरूले राष्ट्रिय पुँजीमा जोड दिएका हुन् । स्वार्थ देखेर नै उनीहरूले यसो भनेका हुन् ।
यसले त हामीकहाँ उद्यम फस्टाउने, लगानी बढ्ने सम्भावना खुम्च्यायो नि ?
लगानी खुम्चिन्छ नै भन्ने छैन । यो दुई किसिमले बढिरहेकै छ । हाम्रो संरचना हिन्दु समाजको हो । हिन्दु समाजमा वैश्यले मात्रै व्यवसाय गर्छ भनिन्छ । विगतमा नेवार जातिले मात्रै व्यवसाय गर्ने भनिन्थ्यो । कसाईले मात्रै मासु बिक्री गर्ने भन्ने थियो । अहिले जसले पनि मासु बिक्री गर्न सक्छन् । जसले पनि कपाल काट्न सक्छन् । जसले पनि लुगा सिलाउन सक्छन् । यसअनुसार नयाँ उद्यमशीलता त बढेको छ । तर यसको विकास सीमित रूपमा मात्रै भयो । यहाँ सैलुन चलाउने व्यक्तिले भारत गएर कसरी शाखा खोल्ने भन्ने सोच राख्नुपर्छ । नेपालको जनसंख्या ३ करोड छ । यसले दिनमा दुई छाक खाँदा ६ करोड छाक खाइरहेका हुन्छौं । यसरी हेर्दा मार्केट ठूलो छ । विगतमा काठमाडौं केन्द्रित थियो । संघीयता भएपछि अहिले धेरै विकेन्द्रीकरण पनि भएको छ ।
म ललितपुरको पाटनमा बस्छु । विगतमा राम्रो रेस्टुरेन्ट जानुपर्दा ठमेल, दरबारमार्ग नै पुग्नुपथ्र्यो । अहिले पाटनभित्रै जस्ता पनि रेस्टुरेन्ट छन् । चितवन, पोखरा पनि त्यस्तै भएको छ । तर यतिले पुगेन । अब चाहिने अर्को चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ । हाम्रो समाज, संरचना, सोचलगायतका कारण समस्या भने हुने गरेको छ । यसमा राजनीतिज्ञलाई मात्रै दोष दिन्नँ । हामी दुई रोपनीमा घर बनाएर गेटचाहिँ मोटरसाइकल छिर्ने मात्रै बनाउँछौं । यो साँघुरो सोचको परिणाम हो ।
समग्रमा वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
नेपालका लागि यो २ हजार वर्षदेखिको कुरा हो । विशेष गरी पश्चिमी विश्लेषकहरूले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मात्रै नेपालीहरू बाहिर जान थालेको भनी लेख्छन् । तर जब राजकुमारी भृकुटीसँग नेवा व्यापारीहरू तिब्बत छिरे, त्यस बेलादेखि पैसा पठाएका छन् । मुस्ताङका मनाङेहरू मलेसियामा ८ सय वर्षअघि व्यवसाय गर्थे । दार्जिलिङ, सिक्किमतिर जानेहरू पनि थिए उति बेलै । अहिले अमेरिकामा गएर त्यहीँको नागरिकता लिएर बसेका छन् । यससँगै हाम्रो रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्र बन्यो । रेमिट्यान्स कुनै हिसाबले परिवर्तन हुन्छ भन्ने छैन । हाम्रो अनुसन्धानले सन् २०३० सम्ममा अस्ट्रेलिया, यूएस, क्यानडा र यूकेमा मात्रै १० लाख नेपाली हुन्छन् । १० लाख नेपालीले हजार डलर मात्रै पठाउँदा पनि धेरै रेमिट्यान्स आउँछ । हाम्रो हिसाबमा सन् २०३० मा ३० देखि ३५ बिलियन डलर रेमिट्यान्स पुग्छ । चाहे त्यो बैंकिङ च्यानलबाट आओस् या हुन्डी । जे भए पनि रेमिट्यान्सको पोको घट्दैन ।
नयाँ–नयाँ श्रम गन्तव्य खुल्दै छन् । साउदी अरबमा दुबई, कतार जस्ता ४/५ वटा नयाँ सहर निर्माण हुँदै छन् । यही हिसाबमा ३/४ वर्षमा १० लाख जति श्रमिक साउदी अरबमै जान सक्छन् । विगतमा कतारमा विमानस्थल निर्माण सकिएपछि नेपाली कामदार कहाँ जाने भन्दै प्रश्न गर्थे । फर्कन्छन् भन्थे । तर झन् बढी कामदार गए । अहिले नेपालीहरू १८० देशमा छन् । हवाई यातायात सजिलो हुँदै छ । नेपालीहरू अवसर खोजेर जाने हुन् । नेपालीहरू पहिला भाँडा माझ्न जान्थे, अहिले पकाउन जान्छन् । अहिले म्यानेजर हुन जान्छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने र रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्छ नै भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । अब आप्रवास श्रमिकबारे एउटा मन्त्रालय नै सिर्जना गर्नुपर्ने भएको छ । यसबारे अध्ययन–अनुसन्धान आवश्यक छ । आप्रवासी श्रमिकका विषयमा हालसम्म नेपालबाटै कुनै अध्ययन–अनुसन्धान भएको छैन । सबै विदेशीले गरिदिएका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो भरथेग रेमिट्यान्सले गरेको छ भने एउटा छुट्टै मन्त्रालय किन नबनाउने ?
रेमिट्यान्सको उपयोगिताबारे तपाईंको धारणा कस्तो छ ?
उपयोगिताका दुई पाटा छन् । जब डेढ–दुई/सय डलर आउँदै छ भने खान–पिउनमा बाहेक अरू कति नै पैसा बाँकी रहन्छ ? बरु उपयोगिताका विषयमा महिनाको एक/एक डलरको स्किम निकालौं । त्यसो गरियो भने २० लाख डलर मासिक रूपमा आउँछ । यो रकम उत्पादनमूलक ठाउँमा लान सकिन्छ । प्राय: रेमिट्यान्स आउने भनेको ६०/७० प्रतिशत सानो रकम हो । ठूलो रकम ल्याउनेलाई लगानीका लागि वातावरण पनि बनाइदिनुपर्छ । तर अहिले जग्गा किन्न, सेयर बजारमा उपयोग भइरहेको छ । तर हाम्रोमा १० बिलियन रेमिट्यान्स आउँछ भने ८ बिलियन नै लगानीमा आउनुपर्छ भन्ने गलत सोच छ ।
तपाईंले भने जस्तो आइडिया हाम्रो राज्य संयन्त्र र राजनीतिज्ञहरूले किन लगाउँदैनन् ?
राजनीति भनेपछि स्वार्थ जोडिएर आउँछ । तर यो आइडियाबाट कुनै लाभ छैन । पैसा बाँड्ने भन्यो भने उनीहरूले गरिहाल्छन् । श्रमिकका मुद्दा प्राथमिकतामा छैनन् । अहिले भेरोसेल खोप लगाएको श्रमिकले कुवेतमा गएर काम गर्न पाएको छैन । २० हजार जति रोकिएर बसेका छन् । सरकारले पहल गरिदिएर भेरोसेल खोप लगाएकावालालाई पनि स्वीकार गरिदिनू है भन्न सक्छ तर भनिदिएको छैन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व वादको कुरा गर्ने आसेपासेलाई बढावा दिने काममा व्यस्त छ ।
प्रकाशित : माघ ३, २०७८ १९:१६
कोभिड खर्च व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँग लुम्बिनीले माग्यो १० करोड
माघ ३, २०७८ सन्जु पौडेल
तिलोत्तमा — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट तथा सामग्री सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छन् । मुख्यमन्त्री केसीले दोस्रो चरणको कोभिड खर्च व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारले १० करोड श्रोत भर्ना गरिदिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश 'मिनी नेपाल' भएको भन्दै मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश सरकारको बजेटबाट मात्रै जनताको जीवन सुरक्षा गर्न चुनौती हुने प्रष्ट पारे । कोरोनाबाट तराइका जिल्लाहरू बढी प्रभावित भएको र अब गर्मी याममा हुनसक्ने आगलागी र बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै भारतबाट आउने नागरिकलाई परीक्षण गर्दा कोभिड देखिने सम्भावना बढी भएकाले उनीहरूलाई घर पठाउन यातायातका साधनको व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको मुख्यमन्त्री केसीले बताए । त्यसका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारकारले सहकार्य गरी उद्धार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताएका थिए।
सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत संघीय सरोकारवाला निकायसँग भर्चुअल माध्यममा छलफल गर्दै उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनउत्तरदायी भई काम गरिरहेको बताएका थिए। सोही क्रममा मुख्यमन्त्री केसीले प्रधानमन्त्री देउवासँग लुम्बिनी प्रदेशलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
यद्यपि जनताको रक्षा र कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार हरक्षण सक्रिय रहेको मुख्यमन्त्री केसीले बताएका छन् । उनले सबै सरोकारवाला निकायको सहभागितामा प्रदेश सरकार जनताको जीवन रक्षा गर्न लागिपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि बेलहिया, कृष्ण नगर र नेपालगञ्जमा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरी महामारी रोकथाम अभियान अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रकाशित : माघ ३, २०७८ १८:५७
उत्पादनमूलक र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा फरक फरक ब्याजदर कायम गरिने